I-Chameleon, i-Rustic Cabin, i-Unit 1 enompheme wangasese - I-Airbnb
I-Chameleon, i-Rustic Cabin, i-Unit 1 enompheme wangasese
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Gabriel And Ramona
U-Gabriel And Ramona Ungumbungazi ovelele
Unwabu: Ikhabethe lamakamelo angu-2, AKUKHO manzi ampompi futhi awekho amathoyilethi e-casita, ulala 4, mhlawumbe 5, imibhede engu-2 (2) ekamelweni lokulala, kanye nombhede wosuku womuntu owengeziwe (ngemali eyengeziwe engu-$20.) isitofu, ipuleti elishisayo nezinto zikagesi zokupheka. Vula idekhi eMfuleni iPecos! eneziko elingaphandle.
Indlu yokugezela yomphakathi enama-commodes namashawa, izinyawo ezingama-300 ukusuka ku-Chameleon.
Omunye umsindo womgwaqo ungazwakala, ikakhulukazi ngezikhathi zokuhamba ezihamba phambili.
I-Rustic aesthetics enobuhle bokuqala bekhulu lamashumi amabili emithambekeni ebabazekayo yezintaba ze-Sangre de Cristo, osebeni loMfula ohlanzekile wePecos. I-Chameleon iyindlu yamakamelo amabili e-rustic ekwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-5. Imindeni yamukelekile.
Awekho amatende avunyelwe.
Azikho izilwane ezifuywayo ngaphandle uma kunikezwe imvume yangaphambili ngaphambi kokubhukha.
4.88 · 163 okushiwo abanye
I-Pecos River cabins iyisitayela senkundla yekamu emphakathini ovulekile onendlu yokugezela yomphakathi ephakathi nendawo yazo zonke izidingo zenhlanzeko endaweni yethu yangasese. Izivakashi zethu zingajabulela indawo yemvelo enhle ukuze zenze ukudoba, ukugibela izintaba nokuphumula. Izindawo zokufinyelela eziningi emfuleni kokubili ngaphakathi nangaphandle kwendawo.
Ibungazwe ngu-Gabriel And Ramona
Ukusebenzelana kwethu nabavakashi bethu kusekunqumeni kwalabo esibamukelayo. Sizoba nomphakathi noma ngasese njengoba izivakashi zethu zikhetha. Sizotholakala ukuze sinikeze usizo ngesikhathi sokuhlala kwezivakashi zethu.
UGabriel And Ramona Ungumbungazi ovelele